Imibuzo evame ukubuzwa - gomymobi.com
109 izilimi zisekelwa
Sizama ukukusiza ekuqondeni izixazululo zethu ngokushesha
Yize sikholelwa ukuthi kufanele ucwaningo oluhle ekusebenziseni izixazululo zethu ezinhle kakhulu, kepha kwesinye isikhathi uma ungakwazi ukuqonda noma yini, sicela uthole imibuzo yethu evame ukubuzwa ngezansi; futhi khumbula ukuthi sihlale silapha ukukusiza.
Imibuzo ejwayelekile ukubuzwa?
Imibuzo yakho iphendulwe lapha
Ngingaba nomkhawulokudonsa ongenamkhawulo wamawebhusayithi wami?
Impela! Siyaluqinisekisa lolu daba.
Ngingayisebenzisa i-SSL ngesizinda sangokwezifiso?
Cha! Njengamanje asisekeli i-SSL kepha sizokwenza maduzane.
Yebo! Vele uthenge isitifiketi sakho se-SSL bese usisebenzisela isizinda sakho sangokwezifiso.
Ngingaba namakhasi angenamkhawulo wewebhusayithi?
Yebo! Ipulatifomu yethu yakhelwe ukukuvumela ukuthi udale amakhasi wewebhu angenamkhawulo, ukudala kuphela ngendlela othanda ngayo.
Ngingangeza izinto ezintsha emakhasini ewebhu?
Uxolo kodwa cha! Inhloso yethu yesikhulumi ukusiza abantu ukudala iwebhusayithi yebhizinisi ngokushesha ngezindikimba zamawebhusayithi ezakhelwe ngaphakathi, badinga kuphela ukukhetha eyodwa yezingqikithi bese beqala ukwakha iwebhusayithi yokudala; ngeke badinge ukucabanga ukuthi bawahlela kanjani ama-elementi okwenza amakhasi abe mahle, kungukuphazamiseka uma bengenaso isikhathi esiningi.
Yebo! Manje usungadala iwebhusayithi kusuka ekuqaleni nge-Element Builder yethu enamandla.
Ngingakwazi yini ukulanda amawebhusayithi adalwe ngokuphelele?
Yebo! Ngaphandle kokushicilela amawebhusayithi adaliwe njengezizinda zakho / izizinda ezingaphansi, noma ukulayisha nge-FTP, siphinde sikuxhase ekulandeni amawebhusayithi adalwe ngokuphelele.
Ngingaba netimu eyingqayizivele yewebhusayithi yami?
Ngokuyisisekelo, i-anwser yethu inguyebo! Uzodinga ukulayisha itimu yakho ehlukile, bese uyisetha njengeyimfihlo ongayisebenzisela amawebhusayithi wakho kuphela.
Ungasiguqula kanjani isihloko sekhasi lesayithi?
Isihloko sekhasi lesayithi singashintshwa ngezilungiselelo zemenyu yekhasi ngalinye kumodi yokuhlela.
Ungasikhomba kanjani isizinda sami sangokwezifiso kusayithi elenziwe?
Ungakhomba kuphela isizinda sangokwezifiso kumodi yokuhlela, ngemuva kokufaka isizinda sakho sangokwezifiso, kufanele uye kumbhalisi wesizinda bese wenza irekhodi le-CNAME futhi ukhombe esizindeni sethu www.gomymobi.com
Kungenzeka yini ukufaka ibhulogi ezitolo nakumawebhusayithi?
Cha, lesi sixazululo ngeke senziwe maduzane. Sicela usebenzise uhlelo lwangaphandle lokubhuloga njengeMedium bese ufaka isixhumanisi sebhulogi kuwebhusayithi yakho noma esitolo.
Ngaphandle kwezizinda, ngingaba newebhusayithi yebhizinisi noma isitolo?
Yebo! Ilula kakhulu, udinga kuphela ukusebenzisa izizinda zethu ezingaphansi kumawebhusayithi nebhizinisi lakho. Lapho usuvele unezizinda ngokwezifiso, futhi uzabela amawebhusayithi nezitolo zakho, khona-ke konke kusebenza kahle ngaphandle kokulimaza noma ukulahlekelwa.
Ngingaba nesitolo samahhala se-inthanethi unomphela?
Impela! Sikunikeza amathuluzi nezixazululo zokuthengisa imikhiqizo yakho yokudala emhlabeni MAHHALA ngesikhathi sokuphila. Kepha ngenxa yokukhawulela mayelana nezinsizakusebenza, ungahle ube nemikhiqizo eyi-10 enama-akhawunti wamahhala.
Ngingathengisa okuthile kuwebhusayithi yami?
Yebo! Ngemuva kokudala iwebhusayithi, udinga ukuvula isitolo sayo kuphela bese uqala ukuthengisa noma yini onayo.
Imikhiqizo ayiboniswa njengohlobo loku-oda?
Kufanele ufake inkomba yoku-oda yemikhiqizo kuzilungiselelo zomkhiqizo kuqala.
Ngisixhuma kanjani isizinda sami esitolo ngqo?
Isitolo sisebenza njengefolda engaphansi kwesizinda, ngakho-ke akunakwenzeka ukunamathisela isizinda ukuthenga ngqo.
Ngingashintsha kanjani inani lezinto ekhasini lokuphuma?
Ungashintsha kuphela ubuningi ekhasini lenqola, ikhasi lokuphuma kulapho ubeka khona ama-oda kuphela.
Ngingawalandela kanjani ama-oda wami abekiwe?
Ngemuva kokufaka ama-oda ngempumelelo, uzophinde uqondiswe ekhasini le-oda ukuze ukhokhe futhi ulandelele i-oda elisanda kwenziwa, futhi uthola lesi sixhumanisi ku-imeyili ethunyelwe kuma-imeyili wakho we-imeyili.
Ungasishintsha kanjani / uhlele kanjani isixhumanisi sevidiyo kumatimu wesayithi?
Ngezinto ezikhethekile ezingashintshiwe ngabahleli noma ikhodi yomthombo, kufanele udale inkambu kusethingi setimu.php yetimu yesayithi bese usebenzisa i-PHP ukucubungula amanani aguqukile.
Ixwayisa ukuthi ngidinga ukuthuthukisa uhlelo lwami?
Uxolo ngalokhu, kepha ezinye izici nezisombululo kungamalungu akhokhelwayo, sicela uthuthukise uhlelo lwakho lokusebenzisa la mathuluzi. Izinhlelo zethu zishibhile kakhulu, vele uxhumane nathi ukuthola eminye imininingwane.
Uma usebenzisa i-akhawunti yedemo, izici eziningi ezibalulekile zikhutshaziwe, sicela uzame ngama-akhawunti angempela, KUKHULULEKILE ukubhalisa.
Lo mlayezo ubonakala ukwazisa ukuthi i-akhawunti yakho iphelelwe yisikhathi, sicela uvuselele ukuze uqhubeke usebenzise.
Lo mlayezo ubonakala ukwazisa ukuthi awukwazi ukwehlisela phansi i-akhawunti yakho ukuze wehlise izinhlelo, ngoba ipulatifomu ayikwazi ukunquma ukuthi yimaphi amasayithi / izitolo okufanele zisuswe. Ngakho-ke ungavuselela kuphela uhlelo lwakho lwamanje noma uthuthukele ezinhlelweni eziphakeme.
Ngingakwazi yini ukudala amapulani ahlukile esayithi nokugcina?
Uxolo ngalokhu, kepha alikho icebo elihlukanisiwe lesayithi noma lesitolo, kuphela ngohlelo ngokuhlanganiswa kwesayithi nesitolo esisekelwayo, ungavula noma ucishe kuphela izixazululo zesitolo bese usetha umkhawulo wesiza nezinsiza zesitolo.
Silapha ukukusiza ukuthi wakhe amawebhusayithi wakho webhizinisi ngokushesha, kalula nangempumelelo; futhi ikunikeze isisombululo esihle kakhulu sokuthengisa imikhiqizo yakho yokudala emhlabeni ngekhomishini mahhala ngokuphelele, uthola yonke inzuzo.
Dlulisa amehlo kuzindikimba zewebhusayithi
Sisebenzisa izinhlobo ezahlukahlukene zamakhukhi ukwengeza ulwazi lwakho kuwebhusayithi yethu. Sisebenzisa amakhukhi ukuthuthukisa ulwazi lomsebenzisi, nokuhlaziya ithrafikhi yewebhusayithi. Ngalezi zizathu, singabelana ngemininingwane yokusetshenziswa kwesayithi lakho nabalingani bethu bezibalo. Ungavuma ukusetshenziswa kwalobu buchwepheshe ngokuvala lesi saziso, ngokuxhumana nanoma yisiphi isixhumanisi noma inkinobho engaphandle kwalesi saziso noma ngokuqhubeka upheqa ngenye indlela.